Zhe Jiang XinHong Electric Co., Ltd.is riri Xiangyang maindasitiri vematunhu, Liushi, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China. Liushi ndiro guta guru yakaderera-voltage midziyo inChina. Xinhong unobatanidzwa pamwe Shanghai Kangji Electrical Equipment Co ,. Ltd uye Shanghai Dikai Electric mudziyo Co ,. Ltd kuti nyanzvi yokutsvakurudza, kuvandudza, kugadzira, rokutengesa uye basa. Pamwe vanoverengeka inozivikanwa mudzimba uye vatorwa makuru uye svikiro kadikidiki mabhizimisi kuti OEM .. Zvino Shanghai Kangji Electrical Equipment Co ,. Ltd uye Shanghai Dikai Electric Appliance Co., Ltd dziri muna Songjiang, Shanghai province.
Products: akazvimirira tsvakurudzo uye kubudirira kubva AC contactors (AC_and_DC_du-al-kushandiswa Low tembiricha simukai uye pasi simba rakawanda maererano mureza IEC60947.2..). inokosha Anti nokuwa (Feng Xing) contactor nokuda elevator.Special contactor mvura boiler.ac contactor.dc contactor.auxiliary kuonana mufurati, nguva kunonoka block.star Delta Starter, akanyudzwa Starter, chafariz zadzisa ataure uye zvichingodaro.
Enterprise simba: tine rabhoritari, yokutengesa dhipatimendi, kutsvakurudza uye kukura dhipatimendi, kugadzira dhipatimendi, unhu dhipatimendi, utariri dhipatimendi uye nounyanzvi nenyanzvi chikwata, zvakazara isu kushandisa EIP utariri. kambani yedu yave zvakazara vakayambuka gwaro yepamusoro ezvinhu IS09001. zvigadzirwa dzedu vanopupurirwa ne CCC uye CE, tave akaongorora uye akakurukura CNC5 akatevedzana AC contactor uye CNC6-T chaiwo Anti-kuwa (Fengxing) contactor nokuda erevheta. Products tichingamidze National zvaanoda simba Kushanda uye magadzirirwo pamwero kwave asvika kutungamirira pamwero kumba uye kunze. Tinogashira yakakwirira maonero ruzhinji vatengi uye zvigadzirwa yedu aivigirwa toKorea, Brazil, India, Italy, Russia, Taiwanand dzimwe nyika uye kumatunhu.
Enterprise mweya: kudzidza, utsanzi, kuvimbika, kuzvitsaurira.
Quality Gwaro: peopel oriented.qulity based.creativity uye accuracy.keep kuchienderera mberi
Business uzivi: kuti mutengi kudiwa sezvo aitungamirira chinhu. tsvakurudza uye kukudziridza-wa kugadzirwa yepamusoro yakaderera mutengo zvigadzirwa
Enterprise chiratidzo: kuva chakanakisisa contactor mugadziri.